Sambasamba … : misokatra ny mozea momba ny saripika | NewsMada
Sambasamba … : misokatra ny mozea momba ny saripika
Tontosaina androany, etsy amin’ny Instiut français de Madagascar (IFM) etsy Analakely, ny famelabelaran-kevitra lehibe ho fanamarihana ny fisokafan’ny mozea momba ny saripika eto Madagasikara. Marihina fa eny Anjohy no ahitana ity mozea ity. Hampahafantarina ny rehetra, mandritra izao valan-dresaka izao, ny niandohan’ny fananganana ny mozea sy ny nahaterahan’ny tetikasa.
Ho hita taratra amin’izany ny harem-bakoka malagasy eo amin’ny tontolon’ny saripika sy ireo zavatra ho hitan’ny mpitsidika ny mozea. Anisan’izany, ohatra, ny sarin’ireo mpanakanto fahizay, toy ny mpanoratra fanta-daza, tamin’izany fotoana izany, saingy adinodinon’ny taranaka aty aoriana.
Mampahatsiahy tranga samihafa, nametraka tantara, tsara na ratsy, ho an’ny firenena ihany koa ity mozea ity. Ao anatin’izany, ohatra, ny sary mikasika ny voka-dratsin’ny fandalovan’ny rivodoza, tamin’ny volana janoary 1934, teto Madagasikara. Anisan’izany ny fahasimban’ny lalamby, tany Fianarantsoa (zotra FCE). Santionany vitsy monja ireo fa marobe ny fahalalana raiketin’ny sary, hita ao amin’ity mozea vaovao ity.
Marihina fa, ankoatra ny famelabelaran-kevitra, hisy koa fandefasana horonantsary fanadihadiana mikasika ny fakana sary « portrait » na sariolona, mandritra ity fotoana androany ity.